Munguva inguva yakanakisa - Bhaisikopo riri kutsvaira paNetflix | Bezzia
Susana godoy | 24/08/2021 14:00 | Nhau
Ichokwadi kuti maererano nemamuvhi uye nhevedzano, Netflix ndeimwe yemapuratifomu akakura anogara aine zvese zvatinoda. Zvakawanda zvekuti ma premieres avo anogara achiteedzerwa kwazvo. Zvakanaka, kana tikasiya akateedzana padivi, tinowana firimu rave kubudirira kukuru: 'Panguva yakanakisa'.
Zvichida ndeimwe yemafirimu aya anotora pfungwa dzedu, asi nenzira isingatarisirwi. Naizvozvo, zvinogara zviri nyore kutaura nezvavo nekuti ivo vanove zvishongo zvakavanzwa papuratifomu. Chokwadi ndechekuti zita iri ratova rimwe reanonyanya kutariswa uye rakazvimisikidza pakati pegumi vepamusoro paNetflix. Iwe unoda kumuziva zvishoma here?
1 Chii chiri 'Panguva yakanakisa' nezve
2 Firimu rakavakirwa pabhuku risingazivikanwe
3 Nei budiriro ye 'Panguva yakanakisa'
Chii chiri 'Panguva yakanakisa' nezve
Isu tinowana imwe yematimu anodikanwa kwazvo nevataridzi vese, nekuti ndiko kudimburwa kwerudo. Pamusoro pezvo, kune izvi zvinowedzerwa kumwe kubata kwemakomichi uye kuItaly mavambo ayo anogara achibatana zvakakwana. Saka zvinototipa rumbidzo kune izvo zvatinozowana mariri. Asi chii chaizvo nezvacho? Naizvo, inotaura nyaya yemukadzi wechidiki anonzi Marta inherera uye ane chirwere izvo zvisingawanzoitiki. Mushure mekushanyira vanachiremba vazhinji, anofunga kuti inguva yekuwana muchinda wake achifadza.
Zvinotaridza kuti anosangana naye uye Arturo anoita kunge ndizvo zvese zvaanoda. Kunyangwe achiuya achibva kunyika yemhuri yakapfuma uye izvi zvinogona kupa chipingaidzo chisina kujairika. Kunyange paanosangana naMarta, anoziva kuti akasiyana zvachose nevamwe uye izvo zvinoita kuti anzwe kutonyanya kukwezva. Kunyangwe mukadzi wechidiki akafunga kusataura nezve dambudziko rake nekuti anotya chaizvo kuita kwemudiwa wake.
Firimu rakavakirwa pabhuku risingazivikanwe
Dzimwe nguva zvinoitika kuti rudzi urwu rwekupokana chikamu chemabhuku uye mune iyi kesi yanga isiri kuzosiiwa kumashure. Zvinoita sekudaro yakavakirwa pabhuku rezita rimwe chete iro rakanyorwa naEleonora Gaggero. Zvinofanira kutaurwa kuti kunyangwe iye ari iye munyori wenyaya yacho, iye zvakare anoonekwa semutambi mufirimu. Iwe unoda kutumira meseji yakajeka kuti iyo pfungwa yerunako inogona kuve yakasiyana zvakanyanya kubva kune izvo vanhu vanotenda. Iyi inzira yekugona kuongorora zvakanyanya uye zvirinani muvanhu vasina chiratidzo chemuviri icho chinopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo munharaunda. Kunyangwe kune rimwe divi, zvakare yakavakirwa pakupokana nekuti protagonist anofarira Arturo yekuve akanaka kwazvo. Mubatanidzwa wezvinhu zvinotungamira kune chimwe chinhu chakadzama, kana iwe usina nguva muhupenyu huno uye unofanirwa kuishandisa zvizere.
Nei budiriro ye 'Panguva yakanakisa'
Zvikonzero zvekubudirira zvinogona kuve zvakasiyana zvakanyanya. Asi ichokwadi kuti kutofunga kuti firimu rerudo nderimwe remakona acho, nekuti iri rudzi runogamuchirwa zvakanaka nguva dzose. Kunyangwe kune rimwe divi, zvinofanirwa kutaurwa kuti haisi iyo chaiyo firimu remhando iyoyo. Mune ino kesi, kurohwa kwakati wandei kunowedzerwa kunotisiira isu kunhuhwirira kunorwadza. Musanganiswa wemaitiro, uyo unopa kukosha kwakawanda kune tepi. Asi ndezvekuti vese vanofanirwa kubata nezvirwere zvinouraya uye nemakoni kana mazano asingaenderane nezvatingave takajaira. Chido chekurarama, kutsvaga zvinangwa zvavo uye zvinangwa ndeimwe yemazano akajeka anoti 'Panguva yakanakisa inotiudza'. Kana usati wazviona, inguva yakowo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 'Munguva yakanakisa': Kubudirira kweNetflix
Maitiro ekuwedzera mhasuru mumakumbo
Chii chinonzi IBI? Zvese zvaunoda kuti uzive